ny zavatra halako momba an'i Korea-Mpamorona Lee
Izaho tsy mankahala ny sakafo toy izany. Tiako ny sampandraharaha koreana misahana ny sakafo. Fotsiny aho mankahala ny zava-misy fa misy tena kely isan-karazany. Mazava ho azy, ny safidy malalaka dia vokatry ny kolontsaina. Ny fiteny koreana dia tena tsy-pirenena, toy ny trano fisakafoanana kokoa ny hihaona ny hanandrana zavatra takiana ny koreana ho an’ny sekoly ambony. Na angamba ny koreana saina. Ao amin’ny vanin-taona mafana, aho mafana sy mando. Fa toy ny»sauna»ny sisa amin’ny tontolo izao. Aho-mangatsiatsiaka sy ny madio, ary manondraka, sy ao anatin’ny minitra vitsy ny renirano dia nihazakazaka avy eo ambany ny lobaka. Fa madio ny helo rehefa amin’ny hafanana onja avy. Tamin’ny taona lasa, ny hafanana ny onja toy ny lehibe tahaka ny trondro fa nanomboka ho faty tao amin’ny rano, ny toeram-pambolena any amin’ny faritra Atsinanan’i Korea Atsimo. Matetika aho afa-tsy miafina eo ambany ny rivotra mari-pana ny rafitra, dia tsy afaka ny ho tonga nandritra ny fotoana ela. Ny iray amin’ireo tena manelingelina ny zavatra dia ny cicadas. Ireo kely bastards mipetraka sy mihiaka mandritra ny hazo rehetra hatrany am-piandohana ny volana jona-pahatapitry ny septambra. Mandoto sy manelingelina ny tabataba. Miaina toetrandro ririnina mangatsiaka sy be rivotra. Tamin’ny novambra, ny rivotra dia matanjaka kokoa, izy ireo dia afaka hahatratra ny manana halavana iray kilaometatra, ary Izy fotsiny nandady avy eo ambanin’ny akanjo, hangalatra ny farany sisa tavela amin ny hafanana sy mangatsiatsiaka ny fanahinao. Aho mihevitra ny tenako ny olona tsara dia tsara ny teny anglisy fahaiza-matihanina eo amin’ny sehatry ny teny anglisy, ankoatra izany, nianatra teny anglisy ho fiteny faharoa, izay nanome ahy fahalalana ny tsara indrindra miasa sy ny fomba tsy miasa raha ny fianarana teny vahiny. Fantatro fa ity no tsara indrindra amin’ny ny rafitra efa vita, satria misy sivana ho an’ny olona maro, na dia matihanina. Mpianatra manomboka mianatra teny anglisy amin’ny sekoly fanabeazana fototra, izany hoe manodidina ny taona, fa rehefa nahazo diplaoma avy amin’ny sekoly ambaratonga faharoa sy ny handeha any amin’ny Oniversite, dia tsy miteny malagasy mihitsy. Misy zavatra tena tsy mety ny fomba hampianarana. Efa nahita maro ny fahadisoana sy ny fomba maro hanatsarana ny fomba fampianarana. Fampianarana teny anglisy any Asia, dia nampanantena ny asa, fara fahakeliny, roa taona lasa izay. Raha vao tonga tao Korea, tohina aho. Izy tsy nino fa ny olona mipetraka any amin’ny firenena hafa dia afaka ho toy ny olona avy amin’ny planeta hafa. Ny hoe miaina eto an-Tany dia tsy ny tena olana raha toa ka te-hahatsapa izany, satria Koreana dia toy ny vahiny ho ahy. Tena mampihomehy, mazava ho azy, fa tonga saina aho fa ny olon-kafa ho azy ireo ihany koa. Aho ny sehatra vaovao ny weirdness ho azy ireo, rehefa manana vatana amin’ny Avaratra sy Korea Atsimo, saingy samy hafa ny rafi-miasa. Mihevitra aho fa izy rehetra ireo Koreana, izay izy ireo dia tokony hitsidika, fara fahakeliny, indray mandeha eo amin’ny fiainan’izy ireo — ny Demilitarized faritra (DMZ) eo amin’ny Korea Atsimo sy Korea Avaratra, noho ny sisin-tany dia toy izany koa ny tsirairay. Ny koreana ny olona mihevitra loatra izany mangatsiatsiaka. Ao amin’ny tontolo Tandrefana, tsy misy teboka eo amin’ny fametrahana fanontaniana manokana, sy ny afovoany Atsinanana dia ho heverina impolite. Misy olona sasany izay fotsiny maniry eo ambanin’ny hoditra, ary ny iray no vokany fototra toe-javatra iray hafa ho tsara toetra. Koreana dia ireo izay manana fahamendrehana amin’ny fahombiazana, ary tsy mitsahatra ny miezaka ny hampitaha sy ny manandrify azy amin’ny tsirairay. Miezaka ny hampiseho ny sasany toetra izay mihoatra noho izany, resy lahatra aho fa izany dia sarin ny olona iray ny fahombiazana. Izy ireo no mandany vola be amin’ny fitafiana ny fahalavoana sy mihinana ny ady tsy hoe satria, fa tahaka azy be, fa noho izy ireo tsy afaka manao na inona na inona. Izy ireo no tsy manaiky ny fampindramam-bola ho an’ny fiara lafo vidy sy ny rendrarendra fampindramam-bola ho an’ny trano eo amin’ny azo tsapain-tànana boaty, manameloka ny taona maro ny fanandevozana. Mahatsikaiky fa raha mangataka na inona na inona koreana, fa tsy toy izany ny kolontsaina, dia ny mpitsara ny antony ihany koa ny zavatra voalohany hoy izy ireo. Ao amin’ity firenena ity, dia mety ho taona maro any aoriana any raha resaka teknolojia, fa ny fiaraha-monina dia mitovy ny taona maro, fa ny mifamadika amin’izany. Mihevitra aho fa ny fianakaviana. Tsy toy izany ny olona, rehefa tsy mivantana sy milaza izay tiany, ary manantena fa anao hahafantatra ny fikasany. Tsy mamaky ny saintsika. Fantatro fa, ho an’ny ankamaroan’ny hafa, izany dia miankina amin’ny ny teny. Ny teny no namolavola ny kolontsaina izany ho an’ny koreana ny olona mba hanomboka ny didim-pitsarana amin’ny antsipirihany ary avy eo dia hitondra azy ho any amin’ny stop amin’ny farany. Amin’ny teny anglisy (ary amin’ny teny rosiana, dia nanomboka ilay zavatra, ary avy eo dia nitatra ny antsipirihany raha ilaina. Ivelan’ny Seoul, any amin’ny tanàna kely, ianao dia mbola afaka mahita hafahafa fanehoan-kevitra rehefa Koreana jereo ny olona mainty na fotsy. Te haka sary miaraka. Omeo azy ny saina rehetra fa ny olona sasany dia mety hahita ny fanavakavahana. Hitanao ry zalahy ao aminao mifampitantana eny an-dalana. Eto, izany no ara-dalàna. Izany dia tsy ho an’ny lehilahy miray amin’ny lehilahy, izany fotsiny mariky ny namana. Soa ihany, Andriamanitra dia namonjy ny masony, sy tsy hitako matetika. Ry zalahy ireo loatra ny ara-batana amin’ny Ankapobeny, ary mikasika olona rehetra amin’ny fahafantarana fa ny olona any Andrefana sy any Rosia (heterosexuals) maintsy mieritreritra be loatra. Aho amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena indray mandeha, ary tsy misy afa-karazany roa ny ahy fa squats. Miaraka izy ireo milalao amin’ny tsirairay ny rambony, ary toa izy ireo dia samy tena be fitiavana ny hafa. Ny akanjo sy ny kiraro dia tsara ny habeny, ary ny toetra dia tena mahantra. Fianarana ny vokatra eo amin’ny tolotra. Izany dia tena sarotra ny mahita ny sasany fitafiana tena tsy manam-paharoa sy ny tsara tarehy, ny kalitao no tena mendrika. Izany dia na aiza na aiza, dia ho ahy eny an-dalambe, ao amin’ny TV, radio, tao amin’ny trano fisakafoanana sy fisotroana, ny trano fijerena sinema, teatra, ny filokana efitrano, avy ny olona an-tariby isa ny olona izay manodidina ahy. Sarotra ho afa-mandositra, ny mozika dia tsara tarehy, toy ny maneso an-tsaina. Tsy mahagaga avy eo fa izy nekena (na tokony aho milaza fa nanomboka misy) ny governemanta. Dia mora kokoa ny fanaraha-maso ny olona raha miala ny fanirian-daza amin’ny ambaratonga ara-tsaina ny K-pop-javatra. Ankoatra izany, dia be ny orinasa amin’ny an’arivony tapitrisa dolara, izay mino aho fa foana ny governemanta, tena faly ara-bola. Manomboka amin’ny mahatsiravina peta-drindrina, tsy misy hanitra, eny an-dalambe, ary mifarana amin’ny dokam-barotra amin’ny TELE sy filma, misy zavatra iray mba hanampy. Manompo ao amin ny asa fitoriana izay K-pop, sy ny maro hafa Koreana fanohizana ny fanasana atidoha ny fanentanana no tena mahomby indrindra, izay mitarika ho amin’ny firongatry ny taranaka vaovao ny mpanjifa macadors. Efa nahita maro mitory dokam-barotra voarakitra sy tanterahina ao ny androm-piainany. Ny tena lehibe indrindra ara-barotra dokam-barotra ao koreana toa nanome ny lakaoly-mifoka ekipa toy ny mahazatra.
Ao amin’ny firenena iray amin’ny kokoa ny vondrona ara-poko. Mazava ho azy, io multiculturalism dia faritana isan-karazany ny saintsika sy ny fomba fijeriny, ny zavatra tiany, Fialam-boly, ary ny sisa, toy izany koa ny filozofia.
Ny tsiro ny sakafo
Ny olona rehetra tia ny vary. Ny ahy koa, tiako ny vary, nefa izaho tsy afaka ny hihinana amin’ny fotoana rehetra. Malahelo ny fahafahana mba hihinana salads ao Rosia, na Jiosy mofo voasesika, na ny falafel mofo voasesika, na nadininy ny sakafo, zeorziana, na mendrika ny hamburger any Etazonia, na ny na inona na inona koa no tao an-trano, fa mora ny miteny. Mitovy tsiro amin’ny mozika. Izy rehetra mihaino ny K-pop sy EDM mozika fa handihy ny fitaovana elektronika. Ny olona tsy mahafantatra mihoatra noho ny kolontsaina hafa afaka manolotra. Mitovy tsiro amin’ny akanjo. Dia saika tsy misy isan-karazany ny fomba fanoratra. Ny olona manana izany zavatra izany. Aho tsy fashion, fa zava-dehibe, aho ny hitafy ny akanjo mandry sy ny lafiny. Hitako ireo olona ao amin’ny hitafy ny akanjo mandry any amin’ny trano famakiam-boky sy ny ao am-pon’ny an-tanàna, ary tsy toa ahy fa ny voay dia ny kiraro amin’ny fizaran-taona rehetra, ary izy ireo manana ny sata-pirenena ny harena. Maro ny tanora mbola tsy ivelan’i Korea, ary mahagaga fa izy ireo no vitsy na dia tsy liana amin’ny zava-mitranga ivelan’ny izany amin’ny rehetra. Ho hi-techs manome azy ireo ny fahafahana hianatra ny zavatra momba ny sisa amin’ny tontolo izao, fa ny fanazavana be loatra ao an-trano ny fanapahan-jiro eny na faniriana misy. Olana amin’ny samy malagasy ary ny fitiavany ny kolontsaina sy ny tsy maniry ny hampiasa ny fiteny koreana, horonan-tsary, Mampiaraka, an-tserasera, sy ny hafa karazana any amin’ny fahatsapana fa raha toa ka mijanona ho mahatoky amin’ny teny koreana. Ny koreana dia ny toetry ny fitokana-monina ara-kolontsaina izay mpahandro ny sakafo, ary ny mihaino ny mozika, mijery FAHITALAVITRA, ary amin’ny Ankapobeny dia any amin’ny Banky, mitoka-monina, lavitry ny olon-kafa, ary tsy vao manomboka manao safidy ratsy eny amin’ny fotoana ny fotoana. Dia tena sarotra ny mianatra. Izaho mety ho adala, mazava ho azy, tsy tena nifantoka tamin’ny teny tamin’ny voalohany, fa rehefa afaka herintaona any Korea, fa izaho tsy miteny amin’ny fiteny. Ny vahiny rehetra manaiky fa ny teny dia insanely sarotra teny. Fanonona, ny afa-po dia tsy toy ny na inona na inona ataoko, anao efa nianatra ny teo aloha. Ny lojikan’ny language»dia nanova ny lojika izahay taloha. Tena mahafinaritra ny zavatra tsikaritro dia rehefa nanomboka niresaka koreana. Ianao manomboka miresaka momba ahy toy ny hoe izany aho efa nihena. Aho fa tsy ara-tsaina firy. Fantatrao, zava-tsy marina. Fotsiny ianao tsy miteny ny fiteny. Koreana ny vehivavy mahafatifaty sy mahafatifaty, fa misy zavatra sasany fa efa be dia be ny olana raha izaho no naka azy. Any Andrefana, na ny olona ny kolontsainy, ny vavy ho setrin’ny miantefa mivantana amin’ny eny an-dalambe toa tsy ampy, ary ianao mety ho tena desencorajadors. Ny vehivavy matahotra izy ireo rehefa manomboka miresaka ho azy, dia tsy vitsy amin’izy ireo raha ny olon-drehetra hanomboka ny resaka miaraka amin’ny tanjona ny filalaovana fitia. Ny Koreana dia»fivoriana»sy ny»vision», sy ny fivoriana miaraka amin’ny vondrona lehibe ny olona, ary raha afaka mahita azy ireo, dia ny faharoa dia, raha ny tena izy, hihaona ny jamba sy izay roa tamin ireo namany — lahy sy ny vavy — namana, lahy sy vavy. Rehefa ny tovolahy sy ny tovovavy, raha toa ka fantatro nandritra ny fotoana kelikely, ary roa lasa ireo namana, any amin’ny chat toerana iray na iray hafa manome ny mahazo ny daty. Ao amin’ny kolontsaina Tandrefana sy Rosiana, izahay indraindray hiresaka, fa ho an’ny ankamaroan’ny hafa dia aoka ny fihetsehana ny fifandraisana hitranga mazava ho azy tsy misy lehibe ny resaka. Ny zazavavy rehetra toa manahy be loatra momba ny tarehiny. Izy rehetra dia maka an-jatony selfies na aiza na aiza no tianao. Rehetra rivotra freshener avy ny fiara mba ho ny vatan-kazo ny finday dia tokony ho mangatsiatsiaka. K-pop sampy ao amin’ny tantara an-tsehatra daholo izy ireo miahy. Tsy azoko generalizing, efa nihaona tamin’ny maro ireo zatovovavy izay manao zava-mahaliana eo amin’ny fiainany. Fa, toy ny sary hoso-doko, izany no zavatra hitako. Ny zazavavy rehetra ao Korea marisika ny daty ry zalahy avy any amin’ny firenena hafa. Fa ny zava-drehetra dia manova, ny fiaraha-monina dia mbola mieritreritra momba maro ny tovovavy izay manadala ankizilahy miaraka amin’ny olon-tsy fantatra. Fotsiny aho te-hanantitrantitra ny zavatra izay tokony hotehirizintsika ao an-tsaina mialoha avy any Korea, toy izany dia mety tsy mahatsapa ho toy ny an-trano, na ny fomba ela ianao no nipetraka eto. Fa aza mahazo ahy ratsy. Tsy azoko Handeha aho tsy mety. Izaho tsy mankahala azy. Tiako ny Repoblikan’i Korea. Toy izany ny manan-tanindrazana, ary ny mahatsara ny fiainana eto lavitra noho ny mpanohitra
Ny fitsipika momba ny fifandraisana amin'ny ny Sinoa ny vehivavy Aziatika tokan-tena andro Bilaogy →